मैले पारसलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा उनले यो हुन सक्दैन भने, त्यसैले म देह त्याग गर्ने कोशिष पनि गरे : ५ दिनसम्म कोठामा थुनिएर बसें सोनिका (भिडियो हेर्नुस्) – नेपाली सूर्य
November 29, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on मैले पारसलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा उनले यो हुन सक्दैन भने, त्यसैले म देह त्याग गर्ने कोशिष पनि गरे : ५ दिनसम्म कोठामा थुनिएर बसें सोनिका (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । पूर्व युवराज पारससंग नजिकको सम्बन्ध रहेको भनिएकी युट्युवर सोनिका रोकाय फेरी एक पटक राजसंस्थाको पक्षमा खरो उत्रिएकी छन् । उनी कोरोनाको जोखिम सुरु भएसंगै आफ्नो गृहजिल्ला बझागं पुगेकी छन् । पछिल्लो पटक पूर्व युवराज पारस शाहसंग सम्बन्ध विग्रिएको भनिएकी सोनिकाले त्यो भनाईलाई गलत सावित गरिदिएकी छन् ।
पारस विरामी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि निकै भावुक भएकी सोनिकाले फेरी एक पटक राजनीति कुरा गरेकी छन् । उनले पारसका बारेमा निकै बखान गरेकी छन् । उनले राजतन्त्र नै सकिएपछि उनका बारेमा नकारात्मक कुरा नगर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले पारसलाई बुझ्न सबैसंग आग्रह गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘उहाँ पागल भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेकी छु । त्यत्रो राजसंस्था जाँदा उनमा के बितेको थियो होला ? कुनै मानिस प्रेममा धोका खाँदा त कति दुखी हुन्छ भने त्यती धेरै वर्ष राज गरेको राजतन्त्र जाँदा कस्तो भयो होला ? तर त्यो भावना कसैले बुझेन ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
उनले राजाका छोरा विग्रेको भनेर भन्न नमिल्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्यही राजाको छोरा हो जसले मलाई राम्रो बाटोमा हिड्न सिकायो ।’ उनले पारससंग आफ्नो कुनै त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध नभएको बताएकी छन् । मेरो हरेक पटक हिमानी शाहसंग भेटहुँदा सौहार्द पुर्ण भएको बताएकी छन् ।
उनले आफुले पारसको अवस्था देखेर उनको निकै ख्याल गरेको बताइन् । उनले पारसको बंश पनि बझागंको भएका कारण आफुप्रति उनको झुकाव रहेको बताएकी छन् ।
उनले पारससंग आफुलाई विवाह गर्न आग्रह गरेको बताइन् । उनले एक भिडियोमा यो कुरा सार्वजनिक गर्दै भनेकी छन्, ‘उहाँले मलाई राम्रो वाटो देखाउनुभएको थियो । गुरु र चेलीको सम्बन्ध हुनुपर्ने तर मेरो मनमा पा प आयो ।’
‘तपाईसंग यसरी संगै हिड्दा हाम्रो सम्बन्धमा धेरैले नराम्रो भने त्यसैले मलाई विवाह गर्नु भनेँ ।’ तर पारसले स्वीकार नगरेको बताएकी छन् । पारसले आफ्नो प्रेम स्वीकार नगर्दा देह त्याग गर्ने कोशिष गरेको पनि बताइन् । ‘तर म बाँचे’ उनले भिडियोमा भनेकी छन् ।
गलकोटबाट काठमाडौँका लागि उडेको हेलिकप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना
नेपालमा पहिलाेपटक भेटियो अनौठो प्रजातिको परेवा
दु:खद घटना: नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा ढुंगाले च्यापिए यी यात्रु, एसरी सुनाए भ’यानक अनुभव !! (भिडियो हेर्नुस्)
July 7, 2021 July 7, 2021 Nepali Surya
धनगढीकी बेहुली शान्ती शर्माले आमालाई सम्झाउँदै बनाएको टिकटक भाइरल
December 11, 2020 Nepali Surya
५ हजार दिन्छु छोरा पाइदिनु भन्दै पेट बोकाएर फरार ड्राइभर समातिए (भिडियो हेर्नुहोस्)
August 21, 2021 Nepali Surya